Olee Ebe Ị Pụrụ Agba Purim Na March | Save A Train
Home > Travel Europe > Olee Ebe Ị Pụrụ Agba Purim Na March
Oge Ọgụgụ: 7 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 14/08/2020)
Jewish Mardi Gras onye ọ bụla? Tinye ejị Purim! usọrọ Purim na nke 14 na 15 ụbọchị nke Ada, nke iri na abụọ, n'ọnwa nke kalenda ndị Juu nke na-ekwekọ n'àgwà March. Purim nwere a ngagharingosi ka ikuku, na ndị mmadụ ma yi ha kacha mma Sabbath uwe ma ọ bụ fancy uwe - na King Xerxes, Vashti, Queen Esther, Mordecai na Heman n'etiti ndị kasị ewu ewu na ekike. Olee ebe ị pụrụ iso na fun? Ndị a bụ ndị Best obodo usọrọ Jewish ejị Purim na March.
Gịnị bụ Purim?
Ọ bụrụ na ị bụghị maara na Purim, ka anyị mara na ị na. na ekike, , Egwuregwu na nza nke mmanya, Purim bụ otu n'ime Judaism kasị raucous ememe. Ị ga-ama mara mma Esther akpaghasị ọjọ Heman atụmatụ, omenala nke na-mmanya na-egbu na ihe hamantaschen bụ. Ma anyị na-guessing na e nwere ihe ole na ole banyere nke a ezumike nke nwere ike iju gị anya na a ga-adị mma ịmata ma ọ bụrụ na ị na- atụmatụ on so na ememe ndị na-eme ememe Purim.
Ònye Bụ Esther?
The Book of Esther Nleta ndabere nke Purim. Akụkọ ndị Esther, onye na-họọrọ ka ọ bụrụ nwunye ya na Queen nke King Ahasuerus kweere na-Xerxes m nke Persia.
Mgbe Eze ndụmọdụ, Haman, enyikde enye igbu ndị Juu niile na alaeze ukwu, Queen Esther na nwa nwanne papa nakweere nna, Mordecai, akpọku ya ka iji ya mmetụta kwụsị ọbara plan.
Akụkọ a na-gwara ke Book of Esther, mara dị ka Megillah, na-agwụ na Haman nghọta na ndị Juu na ndị a na-azọpụta.
Brussels na Amsterdam site na Ọzụzụ
London na Amsterdam site na Ọzụzụ
Berlin na Amsterdam site Ọzịza
Paris ruo Amsterdam site na Ọzụzụ
Nti Facts banyere Purim:
Ebe a bụ a jụụ mkparịta ụka Starter. Ị maara na Esther bụ a anaghị eri anụ (ma ọ bụ ọ dịghị ihe ọzọ a flexitarian). Dị ka Midrash, mgbe Queen Esther biri n'obí Eze Ahasuerọs, ọ soro onye anaghị eri esịnede n'ụzọ dị ukwuu nke legumes nke mere na ọ ga-agbaji iwu nke kashrut(dietary iwu). N'ihi nke a, e nwere a ọdịnala eri agwa na peas mgbe ị na-eme ememe Purim. (Ka emechara, ị ga-mkpa ihe ike mgbe niile booze na hamantaschen)
Ọ bụrụ na ememme a na-ada egwu ezu ama, anyị ugbu a na-onyinye kwa! The amaokwu n'Akwụkwọ Esta banyere mishloach manot kwuru na anyị kwesịrị eziga onyinye ibe, bụghị nnọọ inye onyinye ibe. N'ihi ya, ọ ka mma-eziga gị ngwugwu nke goodies ka a na enyi via a ozi, karịa nnọọ na-enye ha chara. Onye ọ bụla nwere ike na-eme ka a laa tetween, ka na-eche free n'oru nke nzi ozi ọrụ ma ọ bụ ọbụna na mma Ihọd na mbuli-enyere gị aka-anapụta gị onyinye.
mma? Anyị na-amasị ya!
Milan na Turin Ụgbọ oloko
Lake Como na Turin Ụgbọ oloko
Genoa na Turin Ụgbọ oloko
Parma na Turin Ụgbọ oloko
The Book of Esther bụ naanị na Akwụkwọ Nsọ akwụkwọ nke na-adịghị na-agụnye Chineke aha:
The Book of Esther nwekwara-eme ka mba ndị zoro aka na Temple, ekpere, ma ọ bụ ndị Juu na-eme otú ahụ dị ka kashrut [edebe kọsha].
Salzburg ka Vienna Train ahịa
Ọnụ ahịa Munich ruo Vienna Train
Graz ka Vienna Train ahịa
Prague ka Vienna Train ahịa
Anyị na-adịghị N'ime Hamantaschen nnọọ ma ...
Ha zita ekara na e kwuru na ha mere na-na-anọchi Haman okpu, ntị ma ọ bụ akpa. Ma ọ bụ ihe a obere ihe womanly. Ụfọdụ na-asị kuki ndị a na-anọchi anya Haman ntị (aha Hibru ha, Haman oznei, pụtara dị nnọọ nke a), na-ezo aka a omenala nke igbupụ a omempụ ntị tupu e gbuo ya. The atọ nkuku-anọchi anya ndị atọ nna ochie onye ike ebelatawo Haman ma nye ike Esther ịzọpụta ndị Juu. Ọzọ ozizi: N'ihi na German okwu n'akpa uwe pụtara "obere akpa" ma ọ bụ "n'akpa uwe,"Kuki nwere ike ịpụta Haman akpa na ego ọ na-achụ eze maka ikike igbu ndị Juu.
Bremen na Berlin Ụgbọ oloko
Leipzig ka Berlin Train ahịa
Hanover ka ọnụ ahịa Train Berlin
Hamburg ka Berlin Train ahịa
Na isiokwu nke Food mgbe ị na-eme ememe Purim:
N'ihi Ashkenazi Juu, ikekwe kasị ebe nile nri omenala on Purim na-eri zita ekara oriri dị ka kreplach na hamantashen pastries. Kreplach bụ a pasta triangle jupụtara n'ala beef ma ọ bụ ọkụkọ. Hamantashen bụ triangles nke achịcha dị iche iche mgwakota gburugburu a ndochi ejikarị na ụbọchị ma ọ bụ poppy osisi.
Otu n'ime ndị kasị ewu ewu na nkọwa a omenala bụ na ndị a zita oriri na-anọchi anya Haman atọ jụrụ okpu. Otú ọ dị, n'ihi na ọ na-e-arụ ụka na a ịke nke okpu bụ na-ewu ewu n'oge a oge, e nwere ọtụtụ ndị ọzọ na, karị mara nkọwa maka ihe mere anyị na-eri zita ekara oriri na Purim.
Berlin na Munich Train ahịa
Frankfurt ka Munich Train ahịa
Trier na Munich Ụgbọ oloko
Stuttgart ka Munich Train ahịa
Eze, bú Ahasuerọs, we buru eze si India na Ethiopia, si “Tụpụ ya Kush na-asọpụta.” na Hibru, okwu na-eje ije n'aka ma “India” na “toro toro.” N'ihi ya, ụfọdụ ndị mmadụ na-eri toki mgbe ha na-eme ememe Purim. Ndị ọzọ na-eri Etiopia efere dị ka Etiopia lentil. Na-amuma usoro a toki efere n'ime gị Purim nri, agbalị anụ toki na caramelized yabasị balsamic ufufo anu ma ọ bụ panko crusted toki cutlets na kranberị na ube chutney.
Nantes ka Bordeaux Train ahịa
Ọnụ ego ụgbọ oloko nke Paris ka Bordeaux
Lyon ka Bordeaux Train ahịa
Marseilles ka Bordeaux Train ahịa
Iji na-kọsha, Queen Esther rie onye anaghị eri mgbe o bi na King Achashverosh Obí. Na ya nsọpụrụ, ọtụtụ ndị na-eje ozi a meatless nri ha Purim oriri. Esther nri ẹkewetde nke akụ, osisi, mkpụrụ, na legumes. Nke a bụ otu nkọwa n'azụ omenala eri poppy osisi n'oge ezumike, nke pụta kasị iconically na Ashkenazi hamantaschen ka mohn ndochi.
Nke a All Ụda Ịma ...
Ọ bụrụ na a kọwaa Purim ada maara, Nke ahụ bụ n'ihi na ọ bụ dị ka ihe ọ bụla nke ukwuu dị ka Mardi Gras.
Purim na Mardi Gras ọ bụla na-ada kpọmkwem otu ọnwa tupu a isi, ikekwe na isi ememe okpukpe nke ndị omenala. Onye ọ bụla na-eje ozi, N'ụzọ dị ịtụnanya, dị ka a farcical iwebata ka a oge nke miri okpukpe akpọrọ. n'ihi na Ndị Kraịst, ngafe nke Abụba Tuesday na-eje ozi dị ka onye tinyekwa maka onwe ekwu na onwe ụtọ tupu oge nke Rịọtaara, na ya ruo ogologo oge nke onwe agugo na ọbụna onwe imerụ.
Purim hụrụ ka ndị ọnụ ụzọ ámá na frantic ma miri oké njọ na-achọ oge. The nkwadebe maka Ememme Ngabiga na omenala amalite ụtụtụ mgbe Purim.
Frankfurt ka Cologne Train ahịa
Brussels na Cologne Train ahịa
Vienna ka Cologne Train ahịa
Hanover ka Cologne Train ahịa
Ebe Agba Purim eme ofụri Europe
Ugbu a na anyị nyere gị nkọwa, ka anyị na-agwa gị ebe-ahụ ihe!
Purim na Budapest:
Budapest na March na-agba na njedebe nke oyi oyi na ọtụtụ ezi spring ememme na-enwe. Satọde na Sọnde a na-arụkarị ọrụ Na njem. Dị iche iche na venues na ihe omume na-eme ememe Purim na Budapest. Ọzọkwa ọzọ, ọtụtụ n'ụlọ nzukọ na Budapest gụnyere ndị kasị ibu Dohany Street Ụlọ Nzukọ. Ọzọkwa, na Balint House obodo center maka ndị Juu ụmụ amaala na Budapest ga-nọrọ n'ụlọ ihe n'ihi Purim.
Purim na Zurich:
Ugbu a Hazie maka nke abụọ n'afọ a n'usoro Ariel – Union of Jewish Mmụta Geneva. N'ezie, e nwere ihe karịrị 300 ụmụ akwụkwọ na-eto eto si na-esonụ mba: Switzerland, France, Belgium, Austria, na ọtụtụ ebe ndị ọzọ. Ndị a Purim party goers ga-ezukọ usọrọ Purim ọnụ n'elu a pụrụ iche izu ụka na Zurich. maka tiketi na ihe Ama, onyeisi na Ariel facebook Page.
Interlaken ka Zurich Train ahịa
Lucerne ka Zurich Train ahịa
Lugano ka ọ dị na Zurich Train
Geneva ka Zurich Train ahịa
Purim na Paris:
Afọ a, usọrọ Purim na Paris. The City of Ìhè, The City nke Ịhụnanya, The City of Art. Ọ bụ ugbu a na-ahụ City nke ịrịba Young Jewish Morristown Purim Party! Soro gị kasị mara Paris Purim attire. Ị nwere ike chọta oriri a na pụtara Mayo formrụ Arts Center na Morristown. The omume na-nri N'ihi na Young Jewish Professionals agadi 21 ka 39. nweta Tickets EBE A
Brussels na Paris Train ahịa
London ka Paris Train ahịa
Marseille ka Paris Train ahịa
Amsterdam ka Paris Train ahịa
Purim na London:
-Abịa site gị na-achọ iko akwụkwọ a tiketi na a themed Purim Tea Party. Kwadoro na ndị mara mma Aubrey Park Hotel na The Garden Room on Sunday 17 March, 2019 na 3pm. Enwe ọma ụlọ ọrụ, eri nza nke anụ ntị ihe na-emeri nwa anụmanụ. Ọ dị ya nnọọ na-akawanye curiouser na curiouser. The tiketi price agụnye tii / kọfị, achịcha, scones, na sandwiches... na hamantaschen! nweta Tickets EBE A
Amsterdam ka London Train ahịa
Rotterdam ka London Train ahịa
Ọnụ ahịa ụgbọ oloko Paris na London
Brussels na London Train ahịa
Eru ọkacha mmasị gị ebe hey maka Purim dị mfe site Train. Dị nnọọ isi na n'elu SaveATrain na-azụ a tiketi nkeji, na-enweghị pesky ụgwọ!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcelebrate-purim%2F - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml na i nwere ike ịgbanwe / tr aka / de ma ọ bụ / ru na ndị ọzọ asụsụ.
#Purim #PuriminEurope #PuriminMarch #Purimparty europetravel ememme longtrainjourneys ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ Train Travel